(Emelitere ikpeazụ On: 11/09/2021)
Europe nwere a ụfọdụ oyi amara n'oge oyi ọnwa na-n'adịghị ka ọ bụla ọnọdụ na ụwa. E nwere ọtụtụ nke dịgasị iche iche, na ọ dịghị abụọ ebe nwere otu mmetụta na ikuku. N'ezie, ọtụtụ ndị na-ekwu na obodo n'oge oyi ọnwa na-eche dị ejegharị ejegharị na-a ọhụrụ ebe. Winter nwere kediegwu ike ịgbanwe Europe kpamkpam, na n'aka nke, mepụta ahụmịhe ọhụrụ maka ndị ọbịa nke ha na -agaghị ahụ n'oge ọ bụla n'afọ. The na-ada snow na-eweta na ọ ọtụtụ oyi na-eme na mkpa ememe na ihe niile dị nnọọ ememme. N'agbanyeghị ọtụtụ mgbanwe na ịma mma, ọ gaghị ekwe omume gaa ihe niile. Ọ bụrụ na ị chọrọ njem ka ụfọdụ ndị kasị ewu ewu njem tụrụ, ịga ndị a 5 oyi aga Europe.
Ọ bụrụ na ị na-achọ a oyi wonderland ga itu n'anya ị, ahụ anya ọ gara n'ihu karịa Budapest. Ọ bụ zuru okè obodo a oyi getaway. Otu n'ime isi ihe mere na ọtụtụ họrọ Budapest bụ ọnụ udu. Ị na-na-enweta a mara obodo ahụ maka ihe oké ọnụ ọnụego. Budapest na-abụkarị zuru ndị njem n'oge okpomọkụ. Otú ọ dị, n'oge oyi, ị ga-esi hụ na obodo mara mma na di ntakiri ìgwè mmadụ. E wezụga na, ị nweta ọtụtụ achịcha anwụrụ ọkụ na mmanya dị ụtọ.
Venice nwere ike ghara ịbụ ihe mbụ na-abịa n'uche mgbe ị na-eche na European winters. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị na-aga n'obodo ọwa mmiri n'oge oyi, ị ga-echeta na ọ ruo mgbe ebighị ebi. The jupụtara n'okporo ámá na ụzụ cafes na-toned ala, na ị na-ahụ a anyanwụ nke obodo ahụ n'oge okpomọkụ ike na-egosi. All na na na na naa nke okpomọkụ ọnwa na-anọchi na a nwayọọ na serene ikuku na bụ zuru okè n'ihi na a oyi stroll. Otú ọ dị, ọ dị oké mkpa iburu n'obi na obodo na-abịa ndụ ngwa ngwa mgbe Venice ejị na-apụta gburugburu. Kwa February, obodo na-akawanye a anya nke ọbịa, na ornate masks mmiri n'okporo ámá nke obodo. Creative ekike na dancers n'okporo ámá wetara obodo yi akụkọ ihe mere eme ndụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ a na; oyi na ị ga-echefu, tinye Venice gị ndepụta.
Europe nwere ihe maka onye ọ bụla. Ọ bụ gị na-ekpebi ihe gị oyi wonderland anya dị ka na ojiji Save A Train ka e. Enwere ọtụtụ ihe ị ga -enweta na oge oyi, yabụ mee ihe na -akpali akpali wee gaa nganga n'ihu.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Winter aga Europe” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwinter-destinations-europe%2F%3Flang%3Dig – (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
europetravel trainjourney ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ travelaustria travelfrance travelitaly travelswitzerland njedebe oge oyi ebe njem oyi njem oyi
Train Travel Britain, Zụọnụ Travel China, Train Travel France, Train Travel Holland, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Switzerland, Train Travel The Netherlands, Train Travel UK, Travel Europe